ओलम्पिक एशिया छनौटमा नेपाल भारतसँग खेल्दै ! - ओलम्पिक एशिया छनौटमा नेपाल भारतसँग खेल्दै !
नेपालबहस संवाददाता २०७५, २१ कार्तिक, 08:28:56 PM
काठमाडौँ । ओलम्पिक अन्तर्गत एशिया छनौट फुटबलमा नेपाल बुधबार भारतसँग भिड्ने भएको छ । एशिया छनौट खेल्न नेपाली हाल म्यानमामा रहेको छ । नेपाल रहेको समूह ‘सी’मा भारत, म्यानमा र बङ्गलादेश छन् ।
अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका अनुसार नेपालले दोस्रो खेल कात्तिक २५ गते म्यानमासँग तथा कात्तिक २७ गते बङ्गलादेशसँग खेल्नेछ । दुई हप्ता चीनमा अभ्यास गरी नेपाली टोली शुक्रबार म्यान्मा पुगेको हो ।
२०७५, २१ कार्तिक, 08:28:56 PM